WordPress: Ny Plugin # 1 isaky ny tranokala TSY MAINTSY manana | Martech Zone
Alakamisy Janoary 4, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Rava ny tranokalako androany !!! Tsy azoko antoka hoe karazana spambots iza no nahazo ahy, nefa novonoin'izy ireo tontolo andro ny tranonkalako. Ireto dia spam-bot izay manandrana mamerimberina handefa ny hevitry ny Spam. WordPress dia tsy manana fiarovana amin'ny karazana fanafihana. ary Akismet manampy ihany AORA fandefasana ny spam fanehoan-kevitra.
Mila zavatra handà ny lahatsoratra aho ary izany indrindra no Fihetsika ratsy plugin dia manao.
Ity ny fanapotehana ny zavatra ataony:
Bad behaviour dia andian-tsoratra PHP izay manakana ny spambots tsy hiditra amin'ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny famakafakana ny tena fangatahana HTTP sy fampitahana azy ireo amin'ny mombamomba avy amin'ireo spam fanta-daza. Mihoatra lavitra ny User-Agent sy Referer izany. Ratsy fitondran-tena dia misy amina fonosana rindrambaiko maro mifototra amin'ny PHP, ary koa azo ampidirina amina segondra amin'ny script PHP.
Tsy nampidi-doza ny fametrahana Plugin ary niverina ny tranokalako. marihina fa Fihetsika ratsy efa nanakana ny fandefasana 50 mahery hatramin'ny nametrahako azy tokony ho 10 minitra lasa izay. Ny tranokalako dia efa nahavita zavatra tsara lavitra satria nihena be ny hetsika tahiry. Ary koa, ny laharako Akismet dia tsy ho feno haingana izao.
Nandeha namaky ny tranokalaniko tsirairay aho androany hariva ary nametraka ny Fihetsika ratsy plugin. Tsy tiako hananan'izy ireo ny karazana andro izay nananako! Hataoko ao an-tsaina ihany koa izy ireo amin'ny teknolojia hafa, Fihetsika ratsy namolavola ny haitao ho an'ny sehatra maro samihafa.
Aza adino ny manipy vola mivady amin'ireo olona ireo koa. Azoko lazaina aminao fa ny fahatapahana anio amin'ireo tranokala 4 izay ananako dia mitentina 90% amin'ny vola miditra isan'andro… (noho izany dia tsy zakako ny Starbucks-ko anio!)
Fanavaozana: 1/8/2007 - Ny iray amin'ireo mpanjifako dia nanana olana izay nolaviny ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny pejy fidirana. Raha nijery tranonkala roa hafa aho dia hitako fa ny Bad behaviour dia manana asa vita ao amin'ny Whitelist koa. Tokony hanitsy rakitra ianao, whitelist.inc.php, ary ampio ny adiresy IP izay voasakana amin'ny laharana adiresy IP.
Raha tsy azonao antoka ny adiresy IP voasakana, afaka nanontany momba ny tahiry aho tamin'ity fangatahana ity:
SELECT * AVY amin'ny `wp_bad_beh behaviour` izay` request_uri` toy ny '% fidirana%'
Tags: fitondran-tena ratsyblacklistfanehoan-kevitra bilaogyspam hevitrafanehoan-kevitra momba ny spamwhitelist
6 Jan 2007 amin'ny 1:22 PM
Ary taom-baovao sambatra. Arahabaina nahatratra 100.000 top!
Ary misaotra nampahatsiahy ahy momba ny fitondran-tena ratsy. Nieritreritra aho fa nametraka azy io ary somary tototry ny haben'ny fanehoan-kevitry ny spam azoko tato anatin'ny andro vitsivitsy. Ary koa, nijery ireo statistiko (manetry tena be noho ny anao) aho, dia nahatsikaritra fa be dia be ny fivezivezena amin'ny bilaogiko tonga avy amin'ny mpitety tranonkala tsy miafina; Spots bot amin'ny teny hafa.
Askimet dia nanakana ny fanandramana fanehoan-kevitra 70 isan'andro isan'andro tato anatin'ny andro vitsivitsy.
Na izany na tsy izany, taorian'ny namakiako ny lahatsoratranao dia nanamarina indroa aho tamin'ny alàlan'ny fikirakirana bilaogy, ary - hadisoana mahazatra amin'ny alina - hitako fa hadinoko ny mampiditra ilay plug-in koa. Ankehitriny dia mandeha izy ary liana amin'ny fahombiazan'ny antontan'isa aho.
8 Jan 2007 amin'ny 11:54 PM
Misaotra anao nanondro ahy ity plugin Doug. Hitako nidina ambany ny spam momba ny hevitro hatramin'ny nametrahana azy.
12 Jan 2007 amin'ny 1:23 PM
aleoko ny spam karma 2.2
22 Jan 2007 amin'ny 2:50 PM
Naheno fa nisy bilaogera A sasany nanana olana tamin'ny plug-in, nampiadana ny rafitr'izy ireo, ka nahatonga ny asa bebe kokoa tamin'ny mpizara.
Ity misy programa iray izay miasa amina plug-in anti-spam mpisolo toerana: